Nhau dzeZimbabwe, 01 Ndira 2017
Svondo 1 Ndira 2017
Zvita 31, 2016
Gore rino rakave gore rekusuwa kwakanyanyisa munyaya dzemitambo kudarika kufara.
Sulumani Chimbetu Otaura nezveDambarefu Rake Idzva neKuchata muna 2016
Muimbi wemusambo weDendera, Sulumani Chimbetu anoti gore ra2016 rakamufambira zvakanaka munyaya dzemimhanzi uye muhupenyu hwae sezvo akakwanisa kuchata.
VanaChiremba Vanorwira Kodzero dzeVanhu Voramba Kuti Typhoid Iri Kudzikira muNyika
Sangano ranachiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere chemanyoka cheTyphoid chadzikira, humbowo hunoratidza kuti chirwere ichi chakateshera muguta reHarare nenzvimbo zhinji munyika.
Dare reConCourt Rinoti Ragadzirira Kunzwa Nyaya yaAmai Mujuru yeKuramba maBond Notes
Dare repamusorosoro reConstitutional Court rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joice Mujuru chekuti ma bond notes anzi haasi pamutemo munguva pfupi iri kutevera.
Vamwe Votaura Pamusoro peKuwanda kweMapato Anopikisa, Mibatanidzwa
Pari zvino pane mibatanidzwa yemapato ingada kusvika mitatu kana mina inosanganisira weCoalition of Democrats, national Electoral Reform Agenda (NERA), neNational Transitional Authority.
MDC-T Yoronga Kuendesa vaKasukuwere kuDare neKuvhiringidza Mashandiro eKanzuru yeGweru
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora vanoti vari kuzoendesa kumatare gurukota rezvematunhu VaSaviour Kasukuwere nenyaya yekuvhiringidza kushanda kwameya weguta reGweru VaHamutendi Kombayi nemakanzura avo.